एक HTML तत्व के हो? - Semalt समीक्षा
एक HTML तत्व वेबपृष्ठ वा HTML कागजातको व्यक्तिगत कम्पोनेन्ट हो, एक पटक यो DOM मा पार्स गरिएको छ (कागजात वस्तु मोडेल)। HTML मा नोडहरूको रूख हुन्छ, र सब भन्दा महत्त्वपूर्ण नोड पाठ नोड हो। प्रत्येक नोडको यसको विशिष्ट HTML विशेषताहरू हुन्छन्, र नोडहरूमा पनि अन्य नोडहरूको सामग्री र पाठ हुन सक्छ। बिभिन्न एचटीएमएल नोडहरूले शब्दार्थ प्रस्तुत गर्दछन्, जस्तै शीर्षक नोडहरूले HTML कागजात वा वेबपृष्ठको शीर्षक प्रतिनिधित्व गर्दछ।
HTML एलिमेन्टहरूका बिभिन्न अवधारणाहरू:
१. कागजात बनाम डोम:
HTML कागजात सामान्यतया "कागजात" को रूपमा वितरित गरिन्छ। त्यसपछि तिनीहरू पार्स र DOM (कागजात वस्तु मोडेल) आन्तरिक प्रतिनिधित्व, वेब ब्राउजर भित्र परिवर्तन हुन्छन्। प्रारम्भिक HTML तत्वहरू वा कागजातहरू अमान्य थिए र बिभिन्न सिन्ट्याक्स त्रुटिहरू समावेश थिए। साथै, पार्सिंग प्रक्रिया सबै ठूला र साना त्रुटिहरू ठीक गर्न आवश्यक थियो।
२. तत्वहरू बनाम ट्यागहरू:
ट्यागहरू र एलिमेन्टहरू दुई फरक सर्तहरू हुन् तर प्रायः एक अर्कासँग भ्रमित हुन्छन्। HTML कागजातहरूले ट्यागहरू समावेश गर्दछ, तर कुनै HTML तत्व हुँदैन। अर्को तर्फ, तत्वहरु वेबपेज पार्स पछि उत्पन्न गरिन्छ। सामान्यतया, एचटिएमएल तत्वको स्थिति स्टार्ट ट्यागबाट संकेत गरिन्छ र सम्भाव्य रूपमा बच्चा सामग्री समावेश गर्दछ। यो कुनै पनि समय अन्त्य ट्यागद्वारा समाप्त गर्न सकिन्छ।
S. SGML vs XML:
SGML सीमित समझ र अंगिकारको साथ जटिल हो। अर्कोतर्फ, XML सरल विकल्पको रूपमा विकसित गरिएको छ तर SGML जस्तै ठीक काम गर्दछ। ती दुबै समर्थित एचटीएमएल तत्वहरू र कागजात संरचना जस्तै अनुमति संयोजनहरू निर्दिष्ट गर्न प्रयोग गरिन्छ। म्याक्रोमा, HTML या त HTML5मार्फत वा XHTML मार्फत गठन गर्न सकिन्छ। साथै, DOM एलिमेन्टको रूपमा वेब कागजातको पार्सि an हदसम्म सरल गरिएको छ।
HTML कन्टेनर तत्त्वका अंशहरू:
HTML सिन्ट्याक्समा, सबै तत्वहरू सुरू ट्याग र अन्त ट्यागको साथ लेखिएका हुन्छन्, तिनीहरू बीच सामग्री रहेका छन्। HTML ट्यागमा एलिमेन्टको नाम हुन्छ र ए b्गल कोष्ठकद्वारा घेरिएको हुन्छ। अर्कोतर्फ, अन्तिम ट्यागमा स्ल्याश र एउटा कोष्ठक समावेश छ जुन यसलाई सुरु ट्यागबाट अलग गर्दछ। त्यहाँ HTML प्रकारका बिभिन्न प्रकारहरू छन्, जस्तै कच्चा पाठ तत्वहरू, सामान्य तत्वहरू, र शून्य तत्त्वहरू। शून्य तत्त्वहरूसँग सुरु ट्याग हुन्छ र यसले कुनै अन्त्य ट्याग समावेश गर्दैन।
लिंक, ट्याग, र anchors को एक सिंहावलोकन:
एचटीएमएल उत्तम रिच टेक्स्ट र संरचित कागजात को लागी विभिन्न परम्परागत प्रकाशन मुद्दाहरु को पेशकश को लागी प्रसिद्ध छ। कुन कुराले यसलाई अन्य मार्कअप भाषाहरूबाट अलग गर्दछ हाइपरटेक्स्ट र अन्तर्क्रियात्मक कागजातहरूका सुविधाहरू। HTML लि two्कमा दुईवटा टुक्राहरू हुन्छन्, जसलाई एors्कर, र एक दिशाको रूपमा पनि चिनिन्छ। यी लिंकहरू बिना तपाईंको वेब पृष्ठहरू राम्रोसँग जडान हुने छैन वा राम्रोसँग अनुक्रमणिका हुनेछैन। त्यस्तै गरी, ट्यागहरू र एch्करहरूले तपाईंको वेबसाईटलाई इन्टरनेटमा जडान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यी सबै एचटीएमएल तत्वहरूले तपाईंको साइटको बाउन्स रेट कम गर्न मद्दत गर्दछ, र तपाईं उनीहरूको बारेमा WCAG र बुकमार्किंग साइटहरू जस्तै W3C, WAI (WebAIM), र सिन्थियासेजबाट धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ।